City of Vantaa - 20210226_ylakoululaisten_etakoulu_somali
Wargelin ku socota waalidka ardayda fasallada 7.‒9. oo ku saabsan u wareegista waxbarshada internetka
Sida ay soo jeediyeen golaha wasiirradu, waxaa ardayda fasallada 7-9-aad ee magaalada Vantaa ay u wareegi doonaan waxbarashada dhinaca Internetka ee guriga lagu qaadanaayo mudada u dhexeysa 8.-28.3.2021. Ardayda fasallada 1-6-aad waxaa ay si caadi ah u sii wadan doonaan waxbarashadii ay ku qaadanayeen iskuuulka.
Sida uu dhigaayo sharciga waxbarashada ee tirsigiisu yahay 20 §, goa’aanka ku saabsan u wareegista waxbarashada internetka ma khuseeyo ardayda fasallada 7-9-aad ee qaata caawimaadda waxbarashada iyo kuwa ku jira fasalka diyaarinta. Waxaa ardaydaas ay ka qaybqaadanayaan waxbarashada iskuulka, oo sidii caadiga ahayd ayay iyagu iskuulka u imaanayaan.
Codsiga guud ee goobaha waxbarashada waxaa uu ku egyahay 7.4.2021
Ardayda fasalka sagaalaad waa in ay codsadaan waxbarashada ka dambaysa tan asaasiga ah, ee lagu dalbado codsiga waxbarashada goobaha guud, ugu dambayn 7.4.2021. Haddii loo baahdo waxaa ardayda dhigata fasalka sagaalaad iyo waalidkaba ay iskuulka kula kulmi karaan macallinka ah hagaha waxbarshada, xitaa xilliga lagu guda jiro waxbarashada dhanka internetka ah. Qaabka kulanku u dhacaayo wuxuu noqon doonaa mid la raacaayo talsosiinta ama hagista ku saabsan arrimaha korona.
Jadwalka waxbarashada ee xilliga lagu jiro waxbarashada dhanka internetka ah
Xilliga lagu jiro waxbarashada internetka, waxaa ay waxbarashadu noqon doontaa mid ku salaysan jadwalka waxbarashada ee ardayda. Nidaamka waxbarashada ee iskuul kasta oo si cad loo faahfaahiyay, waxaa lagu qeexay wargelinta iskuulka ee ku qoran luqadda finishka.
Cunto cunista ardayda fasallada 7-9-aad ee xilliga waxbarashada internetka
Ardayda fasallada 7-9-aad ee iskuullada Vantaa waxaa inta lagu guda jiro waxbarashada internetka ah, ay raashinka iskuulka ka cuni karaan saddex iskuul oo kala duwan, ama waalidka ayaa ardayga u soo qaadi kara kiishka ama bacda raashinka ee ardayda loogu talaggalay.
Cuntada iskuulka ee diirran waxaad ka cuni kartaa iskuullada kala ah Peltola, Koivukylä iyo Kilteri, maalmaha shaqada inta u dhexeysa saacadaha 11.30–12.30. Cuntada iskuulka laga cunaayo, waa mid xitaa loogu talaggalay ardayda cunta raashinka gaarka ah.
Haddii uusan ardaygu ka soo qaybgali karin cuntada iskuulka laga cunaayo, waalidka ayaa ardayga u so qaadi kara kiishka ama bacda raashinka ee ardayda loogu talaggalay, waxaana laga soo qaadanayaa goobaha uu iskuul walbaa soo gudbiyay cinwaannadooda. Liiska meelaha laga helaayo raashinka bacaysan hoos ayay ku qoran yihiin. Waalidku waa in uu hore u soo qaadaa kaarka caafimaadka ee ardayga (KELA-kortti), marka uu bacda ama kiishka raashinka soo doonaayo. Ardaygu ma soo doonan karo kiishka ama bacda raashinka. Raashinka bacda ama kiishka ku jira waxaa uu ka kooban yahay halkii marba shan cunto, oo ah raashinkii iskuulka. Raashinka ku jira kiishka waa mid ku habboon dadka cuna raashinka kala duwan, laakiin waxaan ka xunnahay in dhammaanba noocyada kala duan ee raashinka aan laga heleynin kiishka raashinka.
Soo sheeg in ilmuhu uu ka qaybqaadanaayo raashinka iskuulka laga cunaayo iyo inkale, ama in aad u soo doonaysid kiishka ama bacda raashinka iyo inkale, adigoo ka soo jawaabaaya weyddiinta hoos ku qoran, ugu dambayn jimcaha 5.3. saacadda 12. Doorashada waxaa la samaynayaa xilliga waxbarashada internetka ay socoto oo dhan, iyadoo lagu soo gudbin karo isla weydiintaas. Looma baahna in laga soo jawaabo weyddiinta, hadii ardaygu uusan iskuulka raashin u soo doonanaynin, islamraakana waalidku uusan soo doonayn kiishka ama bacda raashinka ee ardayda loogu talaggalay.
Iska diiwaan geli halkaan haddii ardaygu raashin u soo doonanaayo iskuulka ama aad waalid ahaan adigu usoo qaadayso kiishka ama bacda raashinka: https://link.webropol.com/s/ruokailu
Goobaha lagu qaybinaayo kiishka ama bacda raashinka
Iskuulka Peltola (Peltolan koulu, Lummetie 27 (Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuullada Peltola iyo Jokiniemi)
Maalinka qaybinta: Talaada
Saacadda 15:00 -17:00
Iskuulka Länsimäki (Länsimäen koulu), Pallastunturintie 27 (Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuullada Länsimäki iyo Lehtikuusi)
Xafiiska Varia Talvikkitie, Talvikkitie 119 (bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuullada Koivukylä, Havukoski iyo Simonkylä )
Iskuulka Korso (Korson koulu), Kisatie 29 (Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuullada Korso, Mikkola iyo Ruusuvuori)
Iskuulka Kilteri (Kilterin koulu), Iskostie 8 (Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuuka Kilteri)
Iskuulka Hämeenkylä (Hämeenkylän koulu,) Varistontie 3 (Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuullada Hämeenkylä, Martinlaakso iyo Ylästö)
Iskuulka Aurinkokivi (Aurinkokiven koulu), Aurinkokivenkuja 1(Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuulka Aurinkokivi)
Maalmaha qaybinta: Arbaca 10.3. 17.3. iyo 24.3.
Saacadda : 13.00-18.00
Iskuulka Kartanokoski (Kartanokosken koulu), Tilkuntie 5 (Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuullada Veromäki, Kartanokoski, Helsinge skolan iyo iskulka Kansainvälinen koulu)
Maalmaha qaybinta ee ardayda fasalka 7-aad Arbaca kasta: 10.3., 17.3. ja 24.3.
Ardatda fasallada 8-9-aad khamiis kasta : 11.3., 18.3. ja 25.3.
Iskuulka Sotunki (Sotungin koulu), Sotungintie 19 (Bacaha ama kiishashka raashinka ee loogu talaggalay ardayda iskuulka Sotunki)
Adeegyada arrimaha bulshada iyo kuwa saykolojiga (Kuraattori- ja psykologipalvelut )
Adeegyada arrimaha bulshada iyo saykolojiga ee iskuulka waa la heli karaa, xitaa xilliga lagu jiro waxbarashada dhanka internetka ah. Kullamada waxaa iyadoo lagu salaynaayo hadba inta ay baahidu le’eg tahay, loo qabanqaabin doona qaab fool ka fool ah ama dhinaca internetka. Waxaan idinka rajaynayaa in aad sida ugu fudud noola soo xiriiri doontaan, hana ka laballabaynina inaad dhakhso noola soo xiriirtaan.
Daryeelka caafimaadka ee iskuulka
Howlaha daryeelka caafimaadka ee iskuulka sidoodii caadiga ahayd ayay u sii socon doonaan, illaa iyo muddo dambe oo aan la cayimin. Ballammadii arrimaha caafimaadka ee hore loo qabsaday, waxaa si qorshaysan loogu diyaarin doonaa oo ay ka dhacayaan iskuulka gudihiisa. Inta kulanku socdo waxaa lagu dhaqmi doonaa hagista nadaafadda caafimaadka, waxaana la xiranayaa afshareerka. Kalkaaliyayaasha caafimaadka ayaa la soo xiriiri doona waalidiinta dhalay ardayda lagu samaynaayo baaritaanka caafimaadka.
Ardayga ama waalidkiis waxaa ay mar walba la soo xiriiri karaan kalkaalisada caafimaadka ee iskuulkooda. Haddii kalkaalisada caafimaadka aad weydo, waa in aad soo wacdaa telefoonka talosiinta ee daryeelka caafimaadka ardayda iyo iskuulka 09 8395 0025, maalmaha isniin-jimce, saacadda 8–15.
U hoggansan hagista iyo tilmaanbixinta ku saabsan korona, xitaa xilliga aad firaaqaha tahay
Haddii aad dareento in ay ku hayaan xitaa wax yar oo tilmaamaya astaamaha feyruska korona, waa in aad aaddaa baaritaanka korona-ha, guriga joog oo meelna ha uga bixin. Astaamaha lagu garto feyruska korona waxaa ka mid ah madax-xanuun, urka iyo dhadhanka oo qofka ka taga, hargab, sanka oo cabura, qufac, adkaanta neefsashada, tabar ama awood la’aan, daal, murqo-xanuun, dhuun-xanuun, cunaha oo xirma, qandho ama xummad, lallabbo, mantag ama hunqaaco, iyo shuban.
Baaritanka korona waa mid aammin ah, islamarkaana lacag la’aan ah. Inta aad sugayso natiijada baaritaanka, guriga joog, oo meelna ha uga bixin.
Ballanka waqtiga baaritaanka korona waxaad ka qabsansan kartaa
Cinwaanka internetka ee ah koronabotti.hus.fi
Telefoonka talosiinta koroonaha isniin-jimce, saacadda 8–18 iyo sabti-axad saacadda 9–18, tel. 09 839 50070.
Qaabkaan soo socda ayaad naftaada iyo ehelkaagaba uga ilaalin kartaa feyruska korona:
Waxaad yaraysaa la xiriirka dhow ee dadka kale, taasoo loola jeedo in sida ugu suurtaggalsan aad dad aad u yar ula kulanto.
Ku dadaal kala fogaanshaha, waxaadna qofka kale u jirstaa masaafo dhan 2 mitir.
Ku dadaal nadaafadda caafimaadka ee gacmaha iyo qaabka saxda ah ee loo qufaco.
Ardayda fasalka lixaad iyo kuwa ka sii waawaynba, waxaa loo so jeedinayaa in ay qaataan afshareerka.
Telefoonkaaga waxaad ku so degsataa ablikeeshinka Koronavilkku.
Waxaan qoyskiina u rajaynaynaa guul inta lagu guda jiro waxbarashada internetka!
Si wadajir ah aan uga hortagno faafista feyruska korona!